Posted by Shwe Nan Eain
လမ်းမတန်းမြေညီ/ဆိုင်ခန်း/မြေသီးသန့်/အငှား(အမြန်)လိုချင်သူ ရှိသည်။ အိမ်ပိုင်ရှင်များနှင့် အကျိုးတူလုပ်လိုသူများ ဖုံးဖြင့်သော်၎င်း Chat box မှစာရင်းပေးခြင်းဖြင့်လည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ Ph.09 422 977 107 09 42 1717 249 09 78000 8681
Shwe Nan Eain
09 780 008681
Posted by Yadi Real Estate
သိန်း ၇၀၀ - ၁၀၀၀ ၀န်းကျင်သုံးပါမယ် ပထမထပ် Hall Type အကျယ် ၁၅ ပေ ၅၀ ပေနှင့်အထက် ထောင့်ခန်းဖြစ်ကပိုကောင်းသည် တိုက်လတ် (သို့) တိုက်သစ် စာချုပ်စာတမ်း အရှုပ်အရှင်းကင်း Car Parking ရပ်ဖို့အဆင်ပြေရင်ပိုကောင်းသည်။ လမ်းမတန်း (သို့) နေရာကောင်းလမ်းကျယ်ပိုဦးစားပေးပါမယ် ဆေးခန်းဖွင့်ရန်အတွက် ကမာရွတ်၊ ဗဟန်း၊ ‌ရွှေဂုံတိုင်၊ ဒဂုံ၊ လိူင်၊ သမိုင်း၊ အလုံ၊ လမ်း မ‌တော်၊ ပုဇွန်‌‌တောင်၊ ရန်ကင်း၊ ကမ္ဘာအေး မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်ဘက်များရှိလျှင် အမြန်ဝယ်လိုပါတယ် ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင် အကျိုးတူလက်ခံပါတယ်
Yadi Real Estate
09 777 778390
Looking for Landed House - 30 Lakh
၇/၈/၉ မိုင်အနီးရှိလုံးချင်းအိမ် ကုမ္ပဏီဖွင့်ရန်အတွက် ငှားရမ်းလိုပါတယ်ရှင် ? အငှားတလ သိန်း ၃၀ နဲ့ ၄၀ ကြားသုံးပါမယ် ? ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် (သို့) အကျိုးတူလုပ်ကိုင်လိုသူများ ဆက်သွယ်ပေးပါနော်
Posted by La Min Real Estate
အင်းစိန် တွင် တိုက်ခန်း မြေညီ ပ ဒု တ အဝယ်ရှိပါသည် ၀၉ ၇၉၉၄၆၆၅၀၀ viber ၀၉ ၇၉၉၄၆၆၄၉၉
Looking for Apartment - 1,000 Lakh
အမြန်ဝယ်လိုပါတယ်ရှင် ? သိန်း ၇၀၀ - ၁၀၀၀ ၀န်းကျင်သုံးပါမယ် ? ပထမထပ် ? Hall Type ? အကျယ် ၁၅ ပေ ၅၀ ပေနှင့်အထက် ? ထောင့်ခန်းဖြစ်ကပိုကောင်းသည် ? တိုက်လတ် (သို့) တိုက်သစ် ? စာချုပ်စာတမ်း အရှုပ်အရှင်းကင်း ? Car Parking ရပ်ဖို့အဆင်ပြေရင်ပိုကောင်းသည်။ ? လမ်းမတန်း (သို့) နေရာကောင်းလမ်းကျယ်ပိုဦးစားပေးပါမယ် ? ဆေးခန်းဖွင့်ရန်အတွက် ? ကမာရွတ်‌၊ ဗဟန်း၊ ‌ရွှေဂုံတိုင်‌၊ ဒဂုံ၊ လိူင်‌၊ သမိုင်း၊ အလုံ၊ လမ်း ‌မ‌တော်‌၊ ပုဇွန်‌‌တောင်‌၊ ရန်‌ကင်း၊ ကမ္ဘာ‌အေး မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်ဘက်များရှိလျှင် အမြန်ဝယ်လိုပါတယ် ? ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင် ? အကျိုးတူလက်ခံပါတယ် ?ဆက်သွယ်ရန် ?ရတီအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် ☎ 09777778390